အဖေ့ရဲ့ပီစီအို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အဖေ့ရဲ့ပီစီအို
Posted by •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ on Oct 14, 2013 in Creative Writing, Short Story | 41 comments
အမေအခုတလော တရှောင်ရှောင်နဲ့ အစ်ကိုလာနိုင်ရင်လာခဲ့ပါဦး….
ဆိုတဲ့ ဖုန်းထဲက ညိုညို့စကားကြောင့် ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ချင်နေတာကြာပါပြီ။
ဒီတစ်ခါရုံးပိတ်ရက်ကျရင်တော့ ရှောင်တခင်ခွင့်လေးနဲ့တွဲပြီး ခွင့်ရအောင်တောင်းလို့ အိမ်သို့ပြေးလိုက်ဦးမည် ဟုဇနီးထံ သို့လည်းအသိပေးလိုက်သည်။
အပိုဝင်ငွေမရှိ လစာနှင့်လောက်ငှစွာ မငြို ငြင်​ရပေမယ့် မိသားစုလိုက်ခရီးထွက်ရမည့်အရေးမှာတော့ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကြိုတင်စုဆောင်းထားကာမှ တော်ကာကျမည်မို့ ကျောင်းရက်ရှည်မပိတ်တဲ့သားတော်မောင်တွေကိုအကြောင်းပြကာ တစ်ကိုယ်တည်းပဲ မိဘရပ်ထံပြန်ခဲ့ရသည်။
“မင်းအမေကထွေထွေထူးထူးရောဂါရယ်လို့မရှိပါဘူးကွာ မိညိုက သက်သက်စိတ်ပူပြီးဖုန်းဆက်ခေါ်နေတာ”
သားဖြစ်သူ အစိုးရ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေကို နားလည်စွာဖြင့် ပြောနေရပေမယ့် အဖေကိုယ်တိုင်က ကျွန်တော့်ကိုတွေ့ချင်စွာ မျှော်နေတယ်တယ်ဆိုတာ သိသာပါသည်။
မြေးတွေပါ ပါမလာသဖြင့် တပူပူလုပ်နေရှာတဲ့အမေကတော့ ကျွန်တော်ရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပဲ အိပ်ယာထဲကထလို့ သားတော်မောင်စားရန် မီးဖိုချောင်သို့ပင် ကိုယ်တိုင်ဝင်မယ်တကဲကဲလုပ်နေတော့ပြီ။
ညိုညိုကော၊ကျွန်တော်ပါ မိခင်ကြီးအတွက် စိတ်အေးရပြီဖြစ်တာမို့ အမေ့နားတကပ်ကပ်လုပ်နေစရာမလိုတော့။ အမေကိုယ်တိုင် ညိုညိုနှင့်အတူချက်ပြုပ်နေစဉ် အရင်ရက်တွေတုန်းကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေမိသော အိမ်ရှေ့ ဗာဒံပင်အောက်က အဖေ့ရဲ့ပီစီအိုဖုန်းဆိုင်လေးသို့ထွက်လာခဲ့မိသည်။
“လာခဲ့ငါ့သား မင်းလည်းအိမ်ထဲမှာချည့်ညောင်းနေပြီ အဖေကရှေ့ကိုခေါ်ချင်သား မင်းအမေကအလွမ်းသည်နေတာနဲ့ လွှတ်ထားတာ”
ကျန်းမာရွှင်လန်းနေဆဲဖြစ်တဲ့အသက်(၇၀)၀န်းကျင်အရွယ် ဖခင်ကြီးအနီးံ စိတ်ချမ်းသာစွာဝင်ထိုင်ရင်းက သားအဖနှစ်ယောက် ထွေရာလေးပါးတွေပြောဖြစ်ကြသည်။
“ဒါနဲ့အဖေ အခုခေတ်ဆက်သွယ်ရေးက ဖုန်းမျိုးစုံပေါ်နေတော့ အဖေ့ရဲ့ဖုန်းဆိုင်ကအလုပ်ဖြစ်သေးရဲ့လား”
အဖေက ခပ်ပြုံးပြုံးနှင့် ကျွန်တော့်ထံကြည့်ရင်း
“ဖြစ်ပါသေးတယ်ကွာ..အဖေတို့ပင်စင်ယူပြီးကတည်းက ဒီဖုန်းလေးနဲ့ပဲထမင်းစားလာတာ မင်းညီမကျောင်းပြီးသွားပြီးအလုပ်ရတဲ့အထိပဲမို့လား…အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကတော့ ဒီပီစီအိုဖုန်းတွေပဲ လူတွေကအားကိုးနေရတာဆိုတော့ ဒီထက်အများကြီးအလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ကွာ..အခုတော့လည်း အရင်လောက်ဘယ်ဟုတ်တော့မလဲ”
အဖေ့အပြောကြောင့် အလုပ်ရပြီးနောက် အိမ်ထောင်ကျသွားတာမို့ မိဘအပေါ်တာဝန်မကျေနိုင်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှက်သလိုလိုခံစားလိုက်ရသည်။အဖေက ကျွန်တော့်စိတ်ကိုသိသည်ထင့် ရယ်ရယ်မောမောနှင့်ပင်
“အဖေတို့ပီစီအိုလေးတွေမှာလည်း သူ့မိတ်နဲ့သူပြောတဲ့လူတွေရှိနေပါသေးတယ်ကွ မင်းမယုံရင် စောင့်ကြည့်နေ”
အဖေနဲ့ပြောနေရင်းမှာပဲ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကောင်မလေးတစ်ယောက် ရောက်လာသည်။သူမလက်ထဲမှာလည်း လက်ကိုင်ဖုန်းလေးတစ်လုံးကိုင်လို့..သူမ လက်ထဲမှာဖုန်းရှိရက်နှင့် ပီစီအိုဖုန်းဆိုင်ကိုဘာကြောင့်လာပါလိမ့်လို့ တွေးနေဆဲမှာပင် ကောင်မလေးက စားပွဲပေါ်ကဖုန်းခွက်ကိုကောက်နှိပ်တော့သည်။
“ဟဲလို..အမေလား အမေရေ သမီးကိုဖုန်းခေါ်ပါဦး ဒီလအဆောင်လခရော၊ကျောင်းလခပါသွင်းလိုက်ရလို့ပိုက်ဆံပြတ်နေပြီ ဖုန်းဘီလ်လုံးဝပြတ်သွားမှာစိုးလို့ ပီစီအိုကချည့်အထွက်ကောလ်တွေခေါ်နေရတယ်..”
ကောင်မလေးက စကားနည်းနည်းဆက်ပြောအပြီး ဖုန်းချလိုက်ကာ
“ပြောတတ်ဆို မျက်လုံးက ဖုန်းဒိုင်ခွက်ကမိနစ်တွေကို မျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေတာကိုး ဟိဟိ..”
ကောင်မလေးက လက်ထဲမှာလိပ်လာတဲ့ ၁၀၀-တန်လေးကို ကမ်းပေးပြီး ပြန်ထွက်သွားလေသည်။
“တွေ့လားသား..အနောက်လမ်းထဲကအဆောင်နေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေလေ.. တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေဆိုတော့ သူများဖုန်းကိုင် လိုက်ကိုင်ချင်ကြသေးပေမယ့် ဖုန်းဘီလ်ကလည်း၅၀၊ ပီစီအိုကလည်း ၅၀ဆိုတော့ ငွေဖြည့်ကတ်တစ်လုံးတည်းမထည့်နိုင်တော့အထွက်ကောလ်တွေကို ဆိုင်မှာပဲခေါ်ကြတဲ့ ခြွေတာရေးကျောင်းသူတွေပေါ့..”
ညိုညိုက အိမ်ထဲမှထွက်လာကာ ဆီဆမ်းထားသော မုန့်ခေါပြင်တစ်ပန်းကန်နှင့်ရေနွေးဓာတ်ဗူး လာချပေးသည်။
ခဏနေတော့ အိမ်ရှေ့မှာဆိုက္ကားတစ်စီးရပ်လာပြီး မိန်းမ၀၀ကြီးတစ်ယောက်ဆင်းလာကာ
“ဈေးသွားရင်း အရင်ဝင်ခဲ့ရတာအစ်ကိုရေ…စောစောတင်ထားမှ စိတ်အေးအေးချက်ပြုတ်နိုင်မှာ”
“ဟေး မကျင်လား..အင်းအင်း ၅တစ်လုံးပတ်မယ် အရင်အတိုင်းပဲ..အေးအေး ကျန်တာတွေက -××-××-×× ဟုတ်ပြီနော် ဒါဖြင့်စိတ်ချမယ် အင်းအင်း…အိမ်ဖုန်းနဲ့ခေါ်ရင် အဖိုးကြီးကပွမ်နေမှာဆိုးလို့ ဈေးသွားရင်းစောစော တင်လိုက်တာဟေ့”
“’ဒါမျိုးတွေကလည်း ကျိတ်ကျိတ် ကျိတ်ကျိတ် ရှိနေတုန်းလေသားရ”
မိန်းမ၀၀ကြီးပိုက်ဆံရှင်းကာ ထွက်သွားတာနဲ့ အဖေက ကျွန်တော့်ဘက်လှည့်ပြောလိုက်တာပင်။
၃အိမ်ကျော်ရှိ ကာရာအိုကေစားသောက်ဆိုင်မှ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပြေးထွက်လာတာမြင်နေရသည်။
“ဟော လာပါဦးမယ်..အဲဒီအိမ်က အခုကာရာအိုကေစားသောက်ဆိုင်လိုလို၊အနှိပ်ခန်းလိုလိုဖွင့်ထားတာလေ.. တောကခေါ်ထားတဲ့ ကောင်မလေးတွေအများသား”
အဖေက အလွတ်ရနေပုံရသော ဂဏန်းတို့ကိုနှိပ်လျက်က
“နေ့ဘက်ကျတော့လည်း ..မပြောချင်ပါဘူးဘဘကြီးရယ်…အနှိပ်ခန်းရှိတယ်လေ..လျှောက်မပြောနဲ့နော် သမီးတို့ကိုအပြင်ထွက်ရင်မကြိုက်ဘူး”
“ဦးကြီးထွေးလား …မိကြည်ပါ..အမေတို့ကိုခေါ်ပေးပါဦး..သမီးစောင့်နေမယ်သိလား အဲ့ကပဲပြန်ခေါ်လိုက်နော်”
ကောင်မလေးက ဖုန်းချပြီး ဟိုကြည့်ဒီကြည့် ကြည့်နေတုန်း…ထိုကောင်မလေးထွက်လာသော စားသောက်ဆိုင်ထဲမှ ခပ်ဖိုင့်ဖိုင့်ရုပ်ကြမ်းကြမ်း အသက်၅၀၀န်းကျင်လူတစ်ယောက်ထွက်လာနေတာတွေ့လိုက်ရစဉ်
“ဟယ်..ဆိုင်ထဲကဧည့်သည်ပဲ..အဲ့ဒီလူကြီးကတောထဲကသစ်ကုန်သည်လေးဘဘရဲ့..မြို့ကိုရောက်တိုင်း ဆိုင်ကအတွဲခန်းမှ သူ့အငယ်လေးနဲ့လာလာတွေ့နေကျ”
ကောင်မလေးက ပါးစပ်ကလည်း ဟိုပြောဒီပြော ပြောကျင့်ရှိပုံရသည်။
သစ်ကုန်သည်ဆိုသူကြီးကတော့ ထိုကောင်မလေးရှိသည်ကိုပင်ဂရုမထားပဲ ဆိုင်ထဲတန်းတန်းဝင်လာကာ
“မကြာဘူး မကြာဘူး ကျုပ်ကခဏပဲဦးလေး…ကျုပ်ဖုန်းက ဘတ်ထရီကျနေလို့ပါ ဟဲဟဲ”
“ဟဲလို..သြော်..အင်းအင်း ဦးရောက်နေတာကြာပြီ..အခုထွက်ခဲ့လေကွာ..အင်းပါ အပြင်ဆိုင်ကခေါ်တာပါ။သိပါတယ် သိပါတယ် မြန်မြန်သာထွက်ခဲ့နော် ”
သစ်ကုန်သည်ကြီးက သူ့ဟာသူရှိုးတို့ရှန့်တန့်နှင့်ခပ်ပြုံးပြုံးဖြစ်ကာ အဖေ့ထံလှည့်ပြောသည်။
၂၀၀တန်တစ်ရွက် စားပွဲပေါ်တင်ပြီး ခပ်သုတ်သုတ်ပြန်လျှောက်သွားသဖြင့် ဘာမှပြောခွင့်မသာလိုက်ကြတော့။
“တွေ့လားတွေ့လား သူ့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ရတော့မှာမို့အူမြူးနေတာလေ..သူ့ဖုန်းကြီးနဲ့ခေါ်ရင် အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ သူ့မိန်းမကြီးက ဖုန်းကိုယူစစ်တာဆိုလား…”
ကောင်မလေးက တော်တော်စပ်စုထားပုံရစွာ ဖောက်သည်ချနေစဉ် သူမရဲ့ဖုန်းကအတူတူဝင်လာတော့သည်။
ကာရာအိုကေစားသောက်ဆိုင်က စပ်စုမလေးပြန်သွားသည်နှင့်..အဖေနဲ့ကျွန်တော် ကျွန်တော့်သားတွေအကြောင်း ပြောဖြစ်ကြသည်။
၁၀မိနစ်လောက်အကြာစကားကောင်းနေပြီးတော့မှ ဆိုင်ရှေ့မှာဆိုင်ကယ်တစ်စီးရပ်လာသဖြင့် စကားစဖြတ်လိုက်ကြ သည်။
ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှ စတစ်ကော်လံအဖြူလက်ရှည်၊ပိုးပုဆိုးအစိမ်းကွက်တို့ဝတ်ဆင်ထားသော ဌာနဆိုင်ရာတစ်ခုခုမှ ဖြစ်ပုံရတဲ့
“ဟဲလို..××××ဆိုင်ကလား၊ အင်း ညကျရင်တစ်ခန်းချန်ထားပေးပါဗျာ..မနေ့တုန်းက ကျုပ်ဆက်ထားသေးတယ်လေ..သြော် အင်းမှတ်မိရင်ပြီးတာပဲ ..VIPနော်..ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားနော် ”
ဖုန်းကိုချပြီးတာနဲ့ ပိုက်ဆံငါးရာတန်ထုတ်ပေးသဖြင့် အဖေက ၄၅၀-တိတိအမ်းပေးလိုက်တာကို အိတ်ကပ်ထဲထည့်ပြီး ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ပြန်မောင်းထွက်သွားကြသည်။
“ဒါမျိုးတွေကလည်း အညှီအဟောက်ဆိုင်တွေကိုဘွတ်ကင်လှမ်းချိတ်တာ ဆိုင်ဖုန်းမှာ caller ID တပ်ထားရင် သူတို့ ဖုန်းနံပါတ်တွေ သွားပေါ်နေမှာမလိုလားတဲ့လူတွေပေါ့ကွာ”
ကျွန်တော်တို့သားအဖ မုန့်ခေါပြင်ပန်းကန်ကိုလက်စသတ်ပြီးချိန်မှာ ညိုညိုကအိမ်ထဲမှထွက်လာပြီး
“အမလေးဟာ နင့်မုန့်ခေါပြင်တွေတောင် အခုမှလက်စသတ်ရတာ”
“နင့်မုန့်ခေါပြင်ထက် စိတ်ဝင်စားစရာတွေငေးနေရလို့ညိုညိုရေ ဟားဟားဟား”
ညိုညိုက မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်ဖြစ်နေတုန်း အဖေကပါ ပြုံးစိစိနှင့်
“ကဲ..အဖေ့ရဲ့ပီစီအိုဖုန်းဆိုင်မှာ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ လာဆက်နေတတ်သေးသလဲဆိုတာ မင်းမြင်ပြီမဟုတ်လား..ဒါတောင် လက်ကိုင်ဖုန်းတွေလုံးဝမကိုင်နိုင်သေးတဲ့ လူတန်းစားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ငါ့သားရ…
အဲ..မင်းရဲ့သား ငါ့မြေးတွေခေတ်ရောက်လာရင်တော့ အဖေ့တို့လို ပီစီအိုဖုန်းဆိုင်လေးတွေ ရှိချင်မှရှိတော့မပေါ့ကွာ…အခုတော့ ဆက်လက်ချီတက်နေမြဲပဲဟေ့”
အဖေ့ရဲ့ကြွေးကြော်စကားကြားမှ ညိုညိုက နားလည်သွားဟန်ုဖြင့် ပြုံးလျက်သား ခေါင်းတညိတ်ညိတ်လုပ် နေတော့လေသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိုက်တာရှင်။ ဒီလိုဒီလိုလေးတွေလဲရှိသေးတယ်ဆိုတာ အခုမှပဲသိရတော့တယ်။
သားရဲ့ ဒ်ါဖွားမေဂျီးကို ပေးချင်တယ်..။
ဆုပေးတဲ့ သူတွေ ဒေါ်ဖွားမေကိုထည့် ပေးပေးပါ..။
ရွာထဲက.. လူပျိုးသိုးကြီးတွေကို… ပေးရင် အဆင်ပြေပါတယ် ။
ဒီလို..ရသနဲ့သုတကို သမမျှတအောင် ရောပြီး ဖန်တီးပြတတ်တဲ့…
မမနန်းတော်ရာသူရဲ့စာပေလက်ရာကို….
အခုပြန်ဖတ်လိုက်ရလို့ …ကျေနပ် ၀မ်းသာ မိပါကြောင်းးးး
ဘားအံကိုသွားမယ်ဆို ၁၁ လပိုင်း ၇ရက်နေ့ဝန်းကျင်မှသွား
တရုပ်မလေးလို လှတဲ့ နန်းတော်ရာသူ
မထင်မှတ်ထားတဲ့ အကြောင်းလေးကို ပထမဆုံး ဖတ်ဘူးသွားတာ..
အကြောင်းအရာဖွဲ့စည်းမှုလေးရယ်..အရေးအသားလေးက ရိုးရိုးလေးနဲ့ ကောင်းတယ်..
စ…ဖတ်တုန်းက စာရေးသူကို ယောင်္ကျားလေးထင်နေတာ..နောက်မှ သိတာ
တော်တယ်.. မန်းလေးကို လာရင် ထိုးမုန့် ဝယ်ကျွေးပါ..။
စာကိုကော လူကိုပါအားပေးတာကျေးကျေးပါ ကိုကျော်စွာရေ
ကိုကျော်စွာ ကညည်းကို ထိုးမုန့်ဝယ်ကျွေးခိုငးတာအေ့
သူက ညည်းကို မန်းလေးက မှတ်နေတာအေ့
ဟီးးးးညက်ချိရှမ်းတွားလို့ဘာ ဖေပေါက်ရဲ့ ဟီးး
မိဘတွေလည်းအိမ်မှာ ဖုန်းခေါ်ပေးနေဆဲမို့ ရှိတတ်တာလေးတွေကို
အမြင် တစ်မျိုးလေး နဲ့ ဖတ်လို့ အရမ်းကောင်းပါတီ…..
သိကြား ယောက်ခမ လို့ မပြောရဘူး
ဖတ်ရင်းနဲ့ မမြင်ဖြစ်တဲ့ ထောင့်ကလေးတွေကနေ မြင်လာတယ်။
ဒီလို ဒီလိုလေးတွေလည်း ရှိတာပဲ ဆိုတာကိုလေ
ဒီအလုပ်ကလည်း ကုသိုလ်လည်းရ ဝမ်းလဲဝတဲ့အထဲ ပါဦးမယ်ထင်တယ်နော်
အိမ်ပြန်ရောက်တုန်းအားပုဂျိပြောပြတာလေးတွေ နားထောင်ခဲ့ပြီး အခုလိုရေးချင်စိတ်လေးပေါက်လို့ ဇာတ်လမ်းလေးလုပ်ဖြစ်တာပါ။ရေးထားတာတောင်နည်းနည်းကြာပြီဂျားလေးရဲ့
ကျနော်ဒီလို စာလေးတွေကို အရမ်းသဘောကျတယ်။
ဝေဖန်လေကန်ရေးတွေကိုဘဲ ရေးနေတာကြာလာတော့ စိတ်ညောင်းတယ်။
ဒါကြောင့် တစ်လ လုံးလုံး စာမရေးဖြစ်ဘူး။
ဒီ ပိုစ်လေးကို တကယ်ကြိုက်တယ် လူ့ဘ၀အဖွဲ့လေးမို့
အမလေ ကိုယ့်အိမ်နားက ပီစီအိုမှာ လာမဲ့ ဖုန်းစောင့်ရင်း တော်တော်ကြာထိုင်ဖူးလို့ ဂလို ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေ ကြားဖူးမြင်ဖူးခဲ့ပါရဲ့။
ငါ့ညလေး ရေးတော့လည်း ဖတ်လို့ ကောင်းချက်။
အဲသလို မိနစ်နဲ့ ခေါ်တဲ့ ဖုန်းဆိုင်လေးလုပ်မိတာ
အရှိန်နဲ့ အကြာကြီးပြောပြီးမှ မိနစ်တွေကြည့်လန့်သွားတဲ့သူတွေ တွေ့ဖူးတယ်။
အခုတော့ နန်းတော်ရာသူခေါ်ရာနောက် ပါသွားမိတယ်။
အဲ့လိုအားပေးဇဂါးလေးဒွေဂိုဂ သည်းခြေကြိုက် ကျေးဂျုအာတီဒုံ
ဒီလို ဒီလို လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့………
ပီစီအိုဖုံးတွေ ခေတ်မကုန်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။
မထင်မှတ်တာတွေမို့လို့ အံ့လည်း အံ့သြမိပါရဲ့။
အဲသည့် ပီစီအိုဖုံးတွေ ယိုးဒယားမှာလည်း ခေတ်စားလိုက်သေးတယ်…
နယ်ဝေးပြောရင်သက်သာတယ်ဆိုတော့ ရွာမှာလို စားပွဲလေးနဲ့လေ…
နောက်ဆုံး သက်ဆင်အသားကိုက်လို့ဝမှ ဖုန်းဈေးချပေးလိုက်လို့ ပျောက်သွားတာ…
မယုံမရှိနဲ့ ဘန်ကောက် – ချင်းမိုင် ၁မိနစ် ၁၂ဘတ်…
ဒါဖြင့် ထိုင်းကလည်း သာမီးတို့အိမ်နီးချင်းပီသတာပေါ့နော်
ဒီပိုစ့်လေးကို ကြိုက်တယ် …
ထူးခြားတဲ့ အမြင်ရှု့ဒေါင့်လေး ကိုသဘောကျမိပါတယ်…။
ပီစီအိုကတော့ အစိုးရက (ဆက်သွယ်ရေးက) အခုချပေးထားတာတွေ ရုပ်သိမ်းသွားရင်လဲ ကိုယ့်ဖုံးနဲ့ ကိုယ် တပိုင်တနိုင်လုပ်နေတာလေးတွေ ကျန်နေဦးမှာပါ..
သူ့ရဲ့ အသုံးတည့်မှု့တွေက တစ်မျိုးကိုး…
ခင်ခရန်ကုန်မှာ စတိုးဆိုင်လေးဖွင့်တုန်းက အခန်းဌားစဉ်ပါတဲ့ ဖုန်းကို ပီစီအိုလုပ်ဖူးတယ် ဆိုင်လခပေးရမယ့်ငွေကို သူနဲ့တင်ပြည့်လောက် ခဲ့တယ်ဗျ။
အားပေးပြီးတာကြာလှပေါ့..ဖုန်းနဲ့ဖတ်တော့ကွန်မင့်မပေးဖြစ်ဘူး.. အရေးအသားလေးကိုအရမ်းသဘောကျတယ်.. :))
သူ့ဖုန်းကြီးနဲ့ခေါ်ရင် အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ သူ့မိန်းမကြီးက ဖုန်းကိုယူစစ်တာဆိုလား…”
အင်း …. ဇကာတင်ထဲ ပါနေတော့
ဆုရပါစေ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျို့ ..
ဒါမျိုးရေးတတ်ချင်တာ … ဒါပေမဲ့ လုပ်ယူလို့မရတဲ့ အနုပညာဆိုတော့ ခိုးသင်သွားပါတယ်ဗျို့
​ကောင်းလိုက်​ပုံများက​တော့ ပီစီအို ဖုန်းနား​ရောက်​သွားသလိုပဲ ​လောကမှာ ဒါမျိုး​တွေလည်း ရှိတတ်​တာပဲ အဲဒိထဲ​တော့ တို့မပါဘူး
ကပ္ပိယက စာသိပ်​မတတ်​​တော့ မ​ဝေဖန်​တတ်​ပါ။
ပိုက်​ဆံ​ပေးပြီး ငှါးဖတ်​ဖူးတဲ့ ဝတ္ထု​တွေလိုပဲ​ကောင်းတယ်​။
ဆန်​ကာတင်​မက ဆု ပါရနိုင်​မည်​ဖြစ်​​လေသတည်း
ဝါကျတွေ ထောက်နေတာကလွဲလို့ ကြိုက်တယ်ဗျ အမြင်လေးတွေကို။
အဘဖော၊ရဲစည်၊နေ၀န်းနီ၊ကပ္ပိယသာဒင် တို့ရေ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်
အမြင်အတိုင်း ပြောပြပေးတဲ့ yiwai ကိုလည်းကျေးဇူးပါ။
ဂယ်ဆုရသွားဘီမို့ မုန့်ကျွေးပါ… ထမင်းဖိတ်ကျွေးပါ.. ကော်ဖီတိုက်ပါ… ပြန်ရင် ပင်လယ် ငါး၊ ငါးခြောက်တွေ လက်ဆောင်ပေးပါ…